MAXAD KA TAQAAN SHIRKADDA XUKUMADDU MAAGAN TAHAY INAY DEKEDDA BERBERA UGACAN GELISO EE DUBAI WORLD IYO SHIRQOOLADDA KU GADAAMAN | Saxil News Network
MAXAD KA TAQAAN SHIRKADDA XUKUMADDU MAAGAN TAHAY INAY DEKEDDA BERBERA UGACAN GELISO EE DUBAI WORLD IYO SHIRQOOLADDA KU GADAAMAN
April 22, 2015 - Written by admin
Shirkadda Dubai world waxa aasaasay Sheekhii xukumi jiray Dubai ee Sheekh Muxamed Bin Al Rashid Al Maktuum oo M/weyne ku xigeen iyo Raysal wasaare ba ka haa Imaaraatka Carabta.U jeedada ka danbaysay in shirkaddan la aasaaso waxay ahayd in ay waddamadan midoobay ee Carabtu ay heli karaan hab ay dhaqaalahoodan ku tiirsan khayraadka saliida iyo Baatroolka in ay ka guuraan oo habkan adeega maalgelineed u guuraan oo imika dhaqaalaha casriga ahi u badan yahay.
Shirkaddani maaha markii ugu horeysay ee ay maalgelin ku samayso deked ku taala waddamada kulaala Badda Cas ama Baabul-Mandab u dhaw.
Waxay hore u maalgelisay dekeddii Cadan ee dalka Yemen oo ahayd dekeddii labaad ee ugu weynayd adduunka,waxa ka horeysay oo kaliya dekedda New York ee dalka Maraykan.Dekeddan Cadan,intii aanay maalgelin shirkaddan Dubai World, waxay yaalay ilaa laba iyo lixdan wiish(Cranes) oo ah kuwan maraakiibta iyo doonyaha alaabaha ka roga.Waxay lahayd oo ay ahayd meel lagu hagaajiyo maraakiibta waaweyn ee Baatroolka,Naaftada,Saliida iyo badeecooyinka kale ee muhiimka ah sidaa meel ay ka sii qaadan jireen shidaalka laguna hagaajin jiray maraakiibta xumaata ee ka gudbaysa Badda Cas ama Baabul- Manadab.Waad qiyaasi kartaa dekeddaa baaxadeedu intay le’egtahay marka aynu u eegno adeegaa balaadhan ee ay qaban jirtay.
Dekeddii Cadan waxa la wareegtay shirkaddan Dubai World oo laga leeyahay waddamadaa Imaaraadka carabta taas oo ka mida waddmada badda Cas ku teeedsan.Shirkaddii maalgelinta ku samaynaysay dekedda Cadan, waxay bilowday in ay u dhoofisay wiishashkii(Cranes) dekedda imaaraadka carabta.
Dekedii Caddan ee waayo-waayo dunida ugu casrisanayd maanta xaalka ay ku sugan tahay waa laga wada dharagsan yahay iyo halka ay dunida kaga jirto.
Shirkaddani waxa kale oo ay maalgelisay dekedda waddanka aynu jaarka nahay ee Jabuuti oo iyana khilaaf xoogani ka dhex qarxay.
Taasi waxay sababtay in ay maxkamad isla galaan Dubai World iyo dawladdii Jabuuti.
Khilaafkaasi waxa uu ku qasbay dawladdii Jabuuti, in ay abaabulkeedii gasho sidii ay deked kale uga samaysaysan lahayd meesha la yidhaa Dumeera.
Waxa kale oo aynu ognahay in dekedii dalka aynu jaarka nahay ee Somaliya ay la wareegtay shirkad Turkish ah oo markiiba ku dhawaaqday in ay shaqaalaha dhimayso(lay off) iyada oo la og yahay xaalada ay ku sugan yihiin dalka iyo dadka Somaliyeed.
Haddaba,waxa muhiim ah in aynu su’aal is weydiino oo ah,Waddamaddii ictiraafka lahaa marka ay sidaa u gilgishay shirkaddani sida Jabuuti oo kale,Somaliland halkay ka keeni kartaa awoodda sharci ee u damaanad qaadaysa in ay shirkaddani si daacad ah u maalgelinayso dekedda Berbera ee aanay shaqaalaha iyo nidaamka maamul fara gelin ku samaynayn?
Shirkaddan,waxa ka danbaysa farsamo siyaasadeed oo lacag badan lagu daahay taasoo dawladdeena aan u muuqan.
Waddamada imaaraadka carabta waxa aynu wadaagnaa Badda Cas,tartan xoogan oo xaga dekeddaha ahina waxa uu u dhaxeeya waddamada kulaala baddan.
Shirkadda Dubai World,waa baanad ay u samaysteen imaaraadka carabtu in ay ku furfuran ama ku baabi’iyaan tartanka ay kula jiraan dekeddaha waddmadan ay Badda Cas ay wada wadaagaan sida ay ku sameeyeen Dekedii Caddan oo kale.
Waayo,dhaqaalaha dunidu maanta waxa uu u sii guurayaa adeega sida Dekeddaha,Madaarada baananka,IWM.Markaa waxaan leeyahay dawladdeena,laaca aragtaye,laaga ma og tahay.
WARIYE:FAHAD AXMED KAARIYE